CNO/CNDF Ih Ralrin Peknak Thusuah – Meifar
CNO/CNDF Ih Ralrin Peknak Thusuah
(1). Chin National Organization/Chin National Defense Force (CNO/CNDF) hi 2021 kum April 13 ni ih rak din thokmiasi.
၁။ ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်၊ ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (CNO/CNDF) ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁၃) ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
၂။ CNO/CNDF စတင်ဖွဲ့စည်းသည့် အချိန်မှစ၍ ချင်းပြည်သူများအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကာ မတရားမှုကို တော်လှန်သော ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များနဲ့အတူ အာဏာရှင်မှန်သမျှ ကျရှုံးရေး၊ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးနှင့် ချင်းအမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှုများကို အင်တိုက်အားတိုက် ပါဝင်ဆင်နွဲလျက်ရှိပါသည်။
၃။ CNO/CNDF သည် ချင်းအမျိူးသားရေးအတွက် မည်သည့်လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းတခုခု၏ လွှမ်းမိုးမှုမျှမရှိသော တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး ဖလမ်းမြို့နယ်အတွင်း တစ်ခုတည်းသော လက်နက်ကိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ ဖြစ်သည့်အပြင် ဖလမ်းမြို့နယ်နှင့် ချင်းပြည်နယ်ပြင်ပရောက် ဖလမ်းပြည်သူများအားလုံးနှင့် ချင်းလူမျိုးများ၏ သွေးစည်းညီညွှတ်မှုကို အထူးအလေးမြတ်ပြုသော အဖွဲ့အစည်းလည်း ဖြစ်သည်။
၄။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ချင်းပြည်နယ်၊ ဖလမ်းပြည်သူအချင်းချင်း နားလည်မှုလွဲမှား၍ စည်းလုံးမှုပျက်ပြားကာ စိတ်ဝမ်းကွဲစေနိုင်မှုများ ရှောင်ရှားနိုင်ရန် ဖလမ်းမြို့နယ်အတွင်း CNDF မှလွဲ၍ မည်သည့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မျှ ဖွဲ့စည်းခြင်းမရှိရန် အထူးသတိပေးအပ်ပါသည်။
Ralkap In “PDF Pawl Nan Meithal Thlah Uh, အလင်းဝင် Uh. Meithal Nan Thlah Lo Asilen Kan Lo Nuaidarh Thluh Ding” Tin Ca An Tar
Myanmar Ramsung A Buai Hnuah Myanmar Milian Bik Cu Ramdang Ah Aum, A Fanu Khal A Tlangval Thawn Nuam An Tawl Rero